TCN-S800-10 TCN Cosmetics makeup Mashiinka Mashiinka Qurxinta Qurxinta - Shiinaha TCN-S800-10 TCN Cosmetics Qurxinta Maqaarka Bixiyaha Mashiinka Mashiinka, Warshad –TN Mashiinka Iibinta
Bogga ugu weyn » Product » OEM / ODM Mashiinka Iibinta
TCN-S800-10 TCN Cosmetics makeup Qalabka Daryeelka Quruxda Xannaaneynta
La xiriir Qiimaha
Kartoon ama xaashiis
15 maalmood oo shaqo
150000 unug / sanadkii
- Mashiinka lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo waxaa la geyn karaa dukaamada waaweyn, guryaha jiifka ah, suuqyada laga dukaameysto, dukaamada kiimikada ee maalinlaha ah, dukaamada timo jaraha, meelaha qurxinta, qurxinta, hudheelada iyo munaasabadaha kale.
- Isticmaalka saxda ah ee walxaha sida meelaha qurxinta lagu qurxiyo iyo shirkadaha qurxinta ayaa si guud u kordhiyay heerka iibsiga.
- Midabada OEM / ODM iyo shaqooyin kala duwan iyadoo loo eegayo dalabyo kala duwan.
Nala soo xiriirBuugga
Gegada diyaaradaha, Saldhiga tareenka, Mall Shopping, Park, Zoo, Agagaarka muuqaalka, Xafiiska, Hoteelka, Saldhigga dhulka hoostiisa mara, Dugsiga
Mashiinka Qurxinta Qurxinta
Cabirka ka baxsan
H: 1940mm, W: 1008mm, D: 795 mm
50-70 nooc (marka loo eego cabirka badeecada)
Bill, Qadaadiic, Qadaadiic Qeb-qeybiyaha (Protocol MDB)
Xiriirka caadiga ah
Mashiinnada iibinta TCN waxay taageeri karaan MDB caalami ah, heerka DEX, waxay buuxin karaan dhammaan noocyada heerarka caalamiga ah.
Guud ahaan tikniyoolajiyada xumbada, firfircoonaanta iyo xaraashka heerkulka ka wanaagsan.
Ku dar sagxadda taageerada iyo dhammaadka guga hoyga u-keenaha smoothie.
Qaado nidaamka bixinta dhoofinta sida ICT, ITL, MEI, NRI, NAYAX, INGENICO.
Xarkaha guga, weelka suunka, garka xirmooyinka gu'ga waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada kala duwan.
Nidaamka maaraynta fog waxaa loo isticmaali karaa lacag la’aan waxaana lagu bixin karaa maaraynta heerka mashiinka maareynta, ku guuldareysiga jawaab celinta, socodka socodka, isbedelka qiimaha fog.
1.High xoog leh & budada dahaarka leh ee wax lagu xiro oo leh qalab si buuxda u dahaadhan, unug iibin tamarta ku habboon.
2.Sheeska albaabka leh xirmooyinka wareega iyo nalalka LED.
3. Dariishada daaqada sawiraysan.
4.Dhalisyada shidaalka ah ee ku yaal gawaarida.
5.Qaflad kastaa wuxuu hoos ugu fooraraa 45 digrii oo deg deg ah & rar fudud ah.
6. Qaybta dhererka iyo dhererka.
7.Saxaska / lacagta la xiri karo ee sanduuqa.
8.With sensor drop / Vend Assure TM / dareemayaasha dareemayaasha / nidaamka gaarsiinta ballanqaadka. (ku hayso credit ilaa inta la soo saarayo alaabta).
9.GPRS nidaamka kormeerka fog, waxay bixisaa macluumaad dhab ah oo nool.
10.Glass kululeeyaha gundhig galaaska si looga hortago isu soo uruurinta qoyaanka.
11. Qiyaasta kartida iyo heerka cabbirka.
12. Qaab dhismeedka jilicsan ee cuntada fudud, cuntada cusub, gasacadaha iyo dhalooyinka.
Kombaresarada wax ku ool ah, iwm.
Nidaamka Lacag bixinta:
1.IC kaarka, kaarka Aqoonsiga, kantaroolka codka, kaarka bankiga, kaarka deynta, lambarka QR, ogeysiiska bangiga. qadaadiic, biil, nidaamka mushaar guur guurka, kaarka NFC.
Cafes, Canteens, Isbitaalada, Hudheelada, Iskuulada, Tukanada, Dukaamada, Dukaamada, qolalka shirarka, dukaamada, istuudiyo xirfadeed, qolalka sugitaanka iwm.
Nidaamka Maareynta Fog ee TCN
Nidaamka Maareynta Fog ee TCN waa adeeg maareynta webka daruur ku saleysan
taas oo laga heli karo meel kasta oo ka mid ah aaladaha la jaan qaada oo ay ku jiraan PC, telefoonada casriga ah, kiniiniyada iyo wixii la mid ah si fog looga maareeyo loona kormeero ururadaada mashiinada wax lagu iibiyo ee ku kala baahsan goobaha.
Adeegga nidaamka maaraynta fog ee TCN, hawlwadeenada wax iibinta waxay ku maamuli karaan mashiinkooda iibinta hab dhaqan wax ku ool ah oo faa'iido leh, waxay ka faa'iideysteen astaamaha dhammaystiran oo si sahlan loo isticmaali karo ee xogta waqtiga-dhabta ah, sida maareynta alaabada dhexe, maareynta iibka oo la xoojiyay iyo raadraaca , Awood raad raaca lacag ururin, maaraynta buuxinta keydka. Kuwaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin lumis yar, kharash yar, waxtar badan, iyo faa'iidooyin badan.
Adeegga OEM / ODM waa la bixin karaa.
1. In ka badan 100 injineer R&D ah.
2. In kabadan 70 patent qaran.
3.17 sano oo loogu talagalay mashiinnada iibinta.
4.150,000 mitir murabac labajibbaaran.
5.Qarafka soosaarashada in kabadan 300，000 unug.
6.Marge faaiido badan.
7. Khadka tooska ah ee tooska ah ee tooska ah ee tooska ah.
8.Ciidanka khibrada leh ee iibinta iibka ka dib.
9.Waxay soo dirtay kombuyuutar wax qabad sarreeya, biil iyo nidaamka bixinta qadaadiicda.
Nidaamka maamulka TCN ee qaldama mana jiraan lacag sanadle ah.
TCN-CSC-10C (V22) cuntada fudud iyo cabitaanka mashiinka lagu iibiyo
TCN-S800-10 24h Farmashiyaha dukaanka ee internetka laga iibsado oo saabuunta gacmaha lagu kala iibsado
TCN-CFS-8V (V32) khudradda cagaaran ee caafimaadka qabta oo miro khudradda khudradda khudradda milateriga ahi ku jirto
TCN-CMX-10N (V22) mashiinka wax iibsiga suuq geynta caqliga leh oo leh 22 inch taabasho taabasho ah